Masinina fanodinam-baravarankely fanodinana verinia
Motera 10 motera mandeha ho azy maotera mandeha amina milina mavesatra fitaratra
Ity motera ity dia misy motera 6 izay afaka manodina ny sisin'ny vera sy ny arris aloha (0-45 diplaoma), miaraka amina motera 2 ho an'ny seaming eo anoloana ary 2 ny moteur ho an'ny seam-by any aoriana. Ity milina ity dia mampiasa SISTEM BEARING CONVEYOR. Mety amin'ny fanodinana vera kely (40mmx400mm) sy fanodinana vera mavesatra (4mx4m) izy io. Ny masinina dia manana rafitra fiarovana ny hatevin'ny vera. Rehefa apetraka ao anaty masinina ny vera matevina dia hijanona ho azy ny masinina. Izy io dia miaro ny bearings amin'ny famotehana. Ny masinina dia mandray ny fifehezana PLC sy ny interface interface. Ny hafainganam-pandeha dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny mpandrindra tsy misy dingana. Ny velarana fitaratra voahodina dia tena mamirapiratra sy malamalama, manakaiky ny tampon'ny vera. Ity milina ity koa dia asongadin'ny fanodinana malalaka sy ny fandidiana mora.
Motera 11 mandeha ho azy baolina mandeha maotera miova miova fitaratra fitaratra milina
Ity motera ity dia misy motera 6 (No.1-No.6) izay afaka manodina ny sisin'ny vera ambany sy ny arris aloha (0-60 diplaoma), motera 3 (No.7-No.9) izay afaka manodina ny sisin'ny fitaratra fitaratra ary koa eo ambany sisiny, miaraka amina motera 2 ho an'ny seaming any aoriana. Ny dingana rehetra dia vita amin'ny dia iray. Mba hanaovana edging / polishing fisaka, ny motera No.1-No.6 dia mila mijanona amin'ny diplaoma ZERO ary ny motera No.7-9 dia azo ovaina 45 degre ho an'ny arris aloha. Mba hanaovana mitre sy sisiny ambany, ny motera No.1-No.6 dia azo ahitsy amin'ny diplaoma nangatahana ary avadiho ny motera No.7-No.9 ho an'ny diplaoma ZERO ho an'ny fanodinana ambany. Ity milina ity dia mampiasa SISTEM BEARING CONVEYOR. Mety amin'ny fanodinana vera kely (40mmx40mm) sy fanodinana vera mavesatra (4mx4m) izy io.
15 motera mandeha ho azy baolina mandeha maotera miova miova fitaratra fitaratra milina
Ny fizarana voalohany amin'ny motera 6 (No.1-No.6) dia manamboatra ny sisin'ny ambany fitaratra ary ny sisiny miter eo aloha (0-60 diplaoma), motera 2 (No.7-No.8) ho an'ny sezà arris indray ary motera 2 (No. 9-No.10) ho an'ny arris aloha. Ny motera No.11.No.12 sy No.13 dia natao ho an'ny fikosoham-baravarankely sy ny poloney farany rehefa motera No.1-No.6 ho an'ny fanodinana volavola manoloana. Ny kodiarana roa farany dia natao ho an'ny famolahana arris aloha sy aoriana. Ny dingana rehetra dia vita amin'ny dia iray.
Ity milina ity dia mampiasa SISTEM BEARING CONVEYOR. Mety amin'ny fanodinana vera kely (40mmx40mm) sy fanodinana vera mavesatra (4mx4m) izy io. Ny firafitry ny fononteny ambony dia mety hahatonga ny mpanera mihazakazaka milamina mba hiasa kely 40mm habe amin'ny vera.